UGranit Mustafa, uMbhali kwiZifundo zokuRhweba
umbhali: UGranit Mustafa
NgoLwesibini, Novemba 9, 2021
U-Kawai Shiba usungula into eza kuba yeyona projekthi ye-crypto ye-meme entsha ebonelela ngengeniso engenzi nto kubanini bethokheni ngokunikezela ngemivuzo ye-BUSD! Yintoni eyenza iKawai Shiba ibe yodwa? Luphawu lwememe olubonisa i-6% ye-BUSD kunye nenye into enebango elizenzekelayo elibuyekeza abanini […]
NgoLwesihlanu, Novemba 5, 2021
UPhuculo lwe-KickEX lutshintshiselwano oluhlala lukhula lwe-cryptocurrency, okwangoku ekhuthaza urhwebo lwamabala njengoko iqonga lisemncinci kwaye likhula. Ezona mpawu ziphambili zibandakanya isicelo esiphathwayo, inkxaso enkulu yabathengi, imbuyekezo yokudluliselwa, iintlawulo zekhadi letyala, nokunye okuninzi. Uphawu lwendalo lweKickEX luphawu lwe-$KICK. Ngaphandle kokurhweba, i-$KICK inokusetyenziswa [...]
Lwesine, Okthobha 28, 2021
I-Agora Tech Lab (i-ATL) izinikele ekuphuculeni ulawulo lwenkunkuma kwinqanaba lehlabathi ngokusebenzisa i-blockchain ye-leveraging ukusabalalisa iinkqubo zokulawula inkunkuma, apho ukuthatha inxaxheba kwezixeko kuya kuba lula kakhulu. Ngokusebenzisana namashishini asekuhlaleni, iintlawulo zokusetyenziswa kwenkunkuma kubathengi zinokwenziwa ngokukhawuleza nangemirhumo etshiphu kakhulu yentengiselwano. Inkunkuma, ngoku […]
NgoLwesithathu, Oktobha 20, 2021
Inethiwekhi efihliweyo yindawo ebiyelweyo ngokupheleleyo esebenza kwikhowudi yemithombo evulekileyo epheleleyo ngaphandle kwabalamli abaqhuba ukuphazamiseka okuququzelela indawo engenabantu yokunxibelelana nonaniselwano lwemali. I-Conceal Hub luphuhliso olulandelayo lothungelwano lweConceal Network olunika indlela yokudibanisa evala zonke iindawo zokuchukumisa zeConceal Network ecosystem kwenye […]
NgoLwesithathu, Oktobha 6, 2021
I-intanethi ubukhulu becala igxile kwinkqubo yendalo ephantsi kolawulo loorhulumente kunye neenkampani zobuchwephesha. Nangona kunjalo, ngokuziswa kwemali ye-cryptocurrensets kunye nezisombululo ezisekwe kwi-blockchain kumashishini ohlukeneyo, iteknoloji ye-blockchain ibonakalise ukuba inguquko ekwandiseni ukungafihli kulwabiwo-magunya. Ngokwazisa ngokusingathwa kwewebhu okwabelweyo, iteknoloji ye-blockchain ibonakalise amandla okuphazamisa oku […]
NgoMvulo, Oktobha 4, 2021
Tune.fm ngumnatha womculo owabelweyo ovumela iimvumi ukuba zenze inzuzo ngokuthe ngqo kubaphulaphuli bazo ngokusebenzisa ii-micropayments, ii-NFTs, kunye neziganeko zexesha lokwenyani. Tune.fmUmqondo owaphula umhlaba unceda iimvumi ukuba zonyuse ingeniso yazo ngokubavumela ukuba bazuze ngokuthe ngqo kubaphulaphuli babo. Ithoni yemveli ye Tune.fm yemveli yeJAM imele imali yelizwe jikelele etshintshe umculo […]
Ngokugcina iiTokeni zeCashio, unokuba nenxalenye yeCasino kwaye uzuze kwimivuzo yayo! ICashio luphawu olutsha olusebenzayo-olwahlukileyo oluqhutywa kwiBinance Smart Chain. Ngaphandle kokunikezela ubunini obukhethekileyo kubasebenzisi abathembekileyo, iCashio iyazingca ngenkqubo yomvuzo ogqwesileyo. Injongo yeCashio ku […]
USolana (SOL) Uqikelelo lwamaxabiso ngo-2022 nakwiminyaka ezayo- Ngaba i-SOL iya kubetha i-500 yeedola ngo-2022?
NgoLwesihlanu, Septemba 24, 2021
Ngezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, imakethi ye-cryptocur lwemali ihambile kakhulu. Imali yentengiso ye-crypto idlule kwi-2 yezigidi zezigidi zeedola kwakhona. Oku kukhula kuthathelwe ingqalelo njengophawu lwabaninzi, becinga ukuba enye inkunzi yebaleki sele iza kuqala. Nangona kunjalo, nge-7 kaSeptemba, kwenziwa idiphu enkulu, ishiya ezimbini ze […]
NgoLwesibini, Septemba 21, 2021
I-CryptoGames, iqonga lokuguqula ukungcakaza kwe-crypto, lelinye lamaqonga aphambili kushishino lokungcakaza lwe-intanethi. Kuba igubungela eyona midlalo yokungcakaza inje ngeDayisi, iLottery, iBlackjack, iSlot, kunye nePoker, i-CryptoGames yeyona webhusayithi ikhethiweyo yabantu abenza ukungcakaza kunye ne-crypto. Ukurejista, into oyifunayo nesiteketiso kwaye […]